Aung myin | Online Learning
Category - Business Management
Posted on - 2020-10-09 12:02:38
မန်နေဂျာတိုင်း လိုအပ်တဲ့ အဓိကအရည်အချင်း (၃) ခု
စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်မှာ လုပ်ဆောင်နေရတဲ့ မန်နေဂျာတိုင်း လိုအပ်တဲ့ အဓိကအရည်အချင်း ၃-ခု ရှိပါတယ်။
ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ Conceptual Skills ဆိုတဲ့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါကို အလွယ်ဆုံးပြောရရင်တော့ Thinking Skill ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရည်အချင်းဟာ ရာထူးကြီးတဲ့ မန်နေဂျာတွေအတွက် ပိုမိုလိုအပ်ပါတယ်။ မန်နေဂျာတွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကို ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်စွမ်း၊ ကာလရှည်အတွက် မဟာဗျူဟာကျကျ စဉ်းစားနိုင်စွမ်း၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု ရှိလာမလဲဆိုတာကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်စွမ်း ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ့်လုပ်ငန်းက ဦးတည်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်က ဘာလဲ၊ ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့ ကာလတို Target တွေ ဘယ်လိုဆက်စပ်နေသလဲ - ဒါကြောင့် ဘာတွေကို plan လုပ်ထားရမလဲ ဆိုတာတွေကို သိမြင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့နယ်ပယ်မှာ ဘာအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်နေလဲ ဆိုတာကို သုံးသပ်နိုင်ပြီးတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ အန္တရာယ်တွေအလိုက် ဘာအပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်မလဲဆိုတာကို ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မန်နေဂျာတွေဟာ ကိုယ်တာဝန်ယူထားရတဲ့ လုပ်ငန်းဧရိယာပေါ် မူတည်ပြီး ဘယ်လိုအရာတွေက ပြဿနာတစ်ခုရဲ့ အရင်းခံဇစ်မြစ်တွေလည်း၊ ဘာတွေက ပြဿနာရှိကြောင်းကို ဖော်ပြတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေလည်း ဆိုတာတွေကို သိရှိပြီးတော့ အရေးကြီးတဲ့အရာတွေနဲ့ အရေးမကြီးသောအရာများကို ခွဲခြားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ အဖွဲ့အစည်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်နိုင်စွမ်းရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ သမားရိုးကျ နည်းလမ်းတွေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်လို့ရမလဲ ဆိုတာတွေကို သိမြင်နိုင်ဖို့ တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်စွမ်း၊ ရှုပ်ထွေးခက်ခဲတဲ့ ပြသနာတွေကို ဆက်စပ်စဉ်းစား၍ အဖြေရှာနိုင်စွမ်း နဲ့ အိုင်ဒီယာအသစ်တွေကို စဉ်းစားနိုင်စွမ်း ရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ခုကတော့ Human Relation Skills ဆိုတဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို Interpersonal Skills လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း အရာရာကို လုပ်ဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခြားသူများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း၊ အခြားသူများရဲ့ခံစားချက်တွေကို နားလည်နိုင်စွမ်းတွေဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားတွေကို လိုအပ်သလို စည်းရုံးလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ကိုယ့်အထက်အရာရှိတွေနဲ့အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ အခြားသူတွေရဲ့ ပြဿနာတွေ၊ ထင်မြင်ချက် အယူအဆတွေကို နားထောင်ပေးနိုင်ရပါမယ်။ စိတ်ခံစားချက်တွေကို စာနာနားလည်နိုင်စွမ်း ရှိရပါမယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ နှစ်သိမ့်အားပေးရမယ်၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ပေးရမယ် ဆိုတာကို နားလည်သိရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့အိုင်ဒီယာ၊ အတွေးအခေါ်တွေကို အခြားသူတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သူ ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအတွက် ရည်မှန်းချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမယ့် အခြားသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုဖော်ပြတဲ့ အရည်အချင်းဟာ Leadership ဆိုတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု၊ Communication ဆိုတဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံမှု၊ Negotiation ဆိုတဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတို့နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
တတိယ တစ်ခုကတော့ Technical Skills ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အသွေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ်တာဝန်ယူရတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်း၊ ဗဟုသုတနှံ့စပ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာ လက်တွေ့အသုံးချနိုင်စွမ်းရှိခြင်း တို့ကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေများ၊ စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း Procedures များကို ကျွမ်းကျင်စွာသိရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ နည်းပညာရပ်တွေ၊ အသုံးပြုနေတဲ့ ကိရိယာတွေကို သိရှိနေရပါမယ်။ ဥပမာ အရောင်းမန်နေဂျာ တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်တာဝန်ယူရောင်းချရတဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ Policy တွေ၊ စားသုံးသူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို သိရှိထားမှသာ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအလိုက် တာဝန်ယူရတဲ့ ဌာနခွဲမန်နေဂျာများအတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ကိုယ်စီမံအုပ်ချုပ်နေရတဲ့ ဧရိယာမှာ တကယ်လုပ်ဆောင်နေရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ညွှန်ကြားပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူမန်နေဂျာများ လိုအပ်တဲ့ အဓိကအရည်အချင်း (၃) ခုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် အားဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကတော့ Communication Skill, Problem-Solving Skill, Time-Management Skill, Decision-making Skill, Leadership Skills တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအရည်အချင်း ၃-ခုဟာ ဘယ်ဟာက ပိုအရေးပါသလဲဆိုတာ လုပ်ငန်းတွေရဲ့ အမျိုးအစား၊ Size အရွယ်အစားနဲ့ တာဝန်ယူရတဲ့ လုပ်ငန်းနေရာအလိုက် ကွဲပြားခြားနားမှုရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထူးချွန်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်လိုသူတိုင်းဟာ အထက်ပါ အရည်အချင်းများနဲ့ ပြည့်စုံနေအောင် လေ့လာဖြည့်ဆည်းထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Learning can happen anywhere with our apps on your mobile device.
© 2022 Aung Myin. All rights reserved.